Khilaafka Carabta oo Fashiliyey U Jeedadii Carabtu Ka Lahayd Dekedaha Somalia iyo Yemen – Radio Daljir
Luulyo 30, 2017 7:58 b 0
Kadib khilaafkii dhex maray wadamada Gacanka Carabta 5-tii Bishii Jun ee Sannadkan 2017-ka wuxuu kashifay arimo badan oo markii hore naga daahnaa ama naga qarsanaa oo naloo tusi jiray waji kale ama eedooda la saari-jiray dawlado kale sida; kacdoonkii wadamada Carabta ee Sannadkii 2011-kii isbedeladii Siyaasadeed ee ka dhashay, ka hortagii iyo la-dagaalankii kacdoonkaas, dagaalada sokeeye, dawlad-la’aanta, gaajada, dib u dhaca iyo khilaafaadka ka jirta wadamada Carabta, faragelinta Israa’il, Iiraan iyo reer galbeedka ee arimaha Carabta iyo kaalinta ay ku leeyihiin wadamada khalijka iyo dhaqaalahooda.
Markii hore waxaa naloo sawiray in dagaalku yahay ka hortaga kacdoonka Dimoqoraadiyada, xorriyada, isbedel-doonka Siyaasadeed ee shucuubta Carabta, afkaarta shiicada iyo xagjirnimada, waxaa la inqilaabay kacdoonkii Masar, Liibiya, Tuunis, Suuriya iyo Yemen, waxaa la sameeyey ciidan gaashaanbuur Sunni ah oo la dagaalama Shiicada Yemen, Baxreyn, Lubnan Suuriya iyo Ciraaq! Laakiin dagaalkaas wuxuu isku bedelay la-dagaalanka; Midnimada, dawladnimada, wadajirka, Khayraadka Badda, Hawada, Berriga iyo deganaashaha wadamada Carabta!
Dagaalkii lagu galay Yemen ee ay hogaaminayeen Sacuudiga iyo Imaaraadka ee la sheegay in ujeedadiisu tahay; ka xoreynta Yemen Shiicada Xuuthiyiinta iyo soo celinta dawladii sharciga aheyd wuxuu isku bedelay; kala qeybinta shacabka iyo kala goo-goonta dawlada Yemen iyo qabsashada Dekedaha, Jaziiradaha iyo Airporada ama garoomada Yemen!
Xattaa in loo diido Madaxweynihii sharciga ahaa in uu kasoo dego Airporka ama garoonka dayuuradaha Cadan, kadib markii dawlada Imaaraadku qabsatay dhamman Dekedihii Yemen markii laga reebo XUDEYDA, sidoo kale marinka muhiimka ah ee BAABAL-MANDAB oo ay marto 40% Saliida Khalijka, sidoo kalena waxey qabsadeen Jaziirada muhiimka ah ee Socodra ee Soomaaliya iyo Yemen isku haysteen oo hadda laga dhex bixiyey.
Waxaana maanta laga doodayaa meeqa Gobol ayaa Yemen loo kala qeybin-doonaa??? Yaana kala qaadan-doona??? Dekedaha Somaliya waxaa qaatay Imaaraadka markii laga reebo tan Muqdisho,Saldhigyada Ciidan ee Berbera, Boosaaso iyo Muqdisho ee ay maamusho dawlada Imaaraadku laguna daro Siyaasiyiinta iyo Gobalada u riyaaqsan in ay toos ula macaamilaan Imaaraadka iyo Sacuudiga iyaga oo ka madax-banaan dawlada dhexe maxey keeni kartaa???
Maxaa laga rabaa Dekedahaan, garoomadan dayuuradaha iyo Ciidamadan ay noo tababarayaan Khaliijku??? Meeqa Imaaradood ayaa naloo qeybin-doonaa Soomaali hadii aanu nahay??? Meeqa Dekedood ayaa naloo dhisidoonaa???
Yemen, Jabouti iyo Soomaaliya; Dekedahooda, Marinadooda, Garoomadooda Dayuuradaha, Batroolkooda, Saldhigyadooda Ciidan, Awoodooda dawlad-nimo, Dimoqoraadi-yadooda iyo Xorriyadooda waxey Culeys ku yihiin dawladaha Khaliijka sida ay u arkaan tusaale; Dekeda Cadan iyo Dekeda Jabouti waxaa lagu wareejiyey dawlada Imaaraadka Sannadkii 2008 in ay horumariso ayna maamusho.
Waxaa laga celiyey Sannadkii 2013-kii markii lagu eedeeyey in aysan waxba ka qaban, kana xayirtay maal-gelintii iyo dawladihii kale ee diyaarka u ahaa. Hadaba su’aasha la is weeydiin karo waxa ay tahay sidee looga hortagi karaa ama loo yareyn-karaa faragelinta dawladaha Khaliijka ee arimaha gudaha Soomaaliya???
Qalinkii: Dr Mohamed Gacal
Doorashada Gudoomiyaha Gudiga Doorashooyinka Puntland oo Socota